5 SIYAABOOD OO LAGU JOOJIN KARO CUSBOONAYSIINTA TOOSKA AH EE WINDOWS 10 - JILICSAN
5 siyaabood oo lagu joojin karo Cusboonaysiinta tooska ah ee Windows 10
Isticmaalayaasha badankoodu waxay leeyihiin xidhiidh jacayl iyo nacayb marka ay timaado cusboonaysiinta Windows. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in cusboonaysiinta si toos ah loogu rakibo isticmaalayaasha intooda badan oo ay joojiyaan socodka shaqada iyaga oo dalbanaya dib u bilaabista kumbuyuutarka. Intaa waxaa dheer, ma jirto wax dammaanad ah oo ku saabsan inta uu qofku ku eegi doono shaashadda buluuga ah ee dib u bilaabaysa ama inta jeer ee uu kumbiyuutarkoodu dib u bilaabi doono ka hor inta uusan dhammeynin rakibidda cusbooneysiinta. Heerar badan oo jahwareer ah, haddii aad dib u dhigto cusbooneysiinta dhowr jeer, ma awoodi doontid inaad xirto ama dib u bilowdo kumbuyuutarkaaga si caadi ah. Waxaa lagugu qasbi doonaa inaad ku rakibto cusbooneysiinta oo ay weheliso mid ka mid ah ficiladaas. Sababta kale ee ay isticmaalayaashu ugu muuqdaan inay neceb yihiin rakibaadda tooska ah ee cusbooneysiinta ayaa ah in darawalka iyo cusbooneysiinta codsigu ay inta badan jebiyaan waxyaabo ka badan inta ay hagaajinayaan. Tani waxay sii carqaladayn kartaa socodka shaqadaada waxayna kaaga baahan doontaa inaad u weeciso wakhtigaaga iyo tamartaada hagaajinta arrimahan cusub.
Kahor intaan la bilaabin Windows 10, isticmaalayaasha waxaa loo oggolaaday inay hagaajiyaan doorbidkooda cusbooneysiinta oo ay si sax ah u doortaan waxay rabaan Windows inay ku sameeyaan; ama si aad u soo dejiso oo aad u rakibto dhammaan wixii ku soo kordha si toos ah, u soo dejiso wixii cusbooneed laakiin rakib kaliya marka la ogolaado, ogeysii isticmaalaha ka hor inta aanad soo dejin, iyo ugu dambayn, waligaa ha iska hubin wax cusub. Isku day lagu doonayo in lagu hagaajiyo oo aan loo adkeyn nidaamka cusboonaysiinta, Microsoft waxay meesha ka saartay dhammaan xulashooyinkan Windows 10.
Ka saarida is-habayntan waxay si dabiici ah u kicisay muran ka dhex jira isticmaalayaasha khibrada leh laakiin waxay sidoo kale heleen habab ku xeeran habka is-cusboonaysiinta. Waxaa jira habab badan oo toos ah iyo kuwa aan toos ahayn si loo joojiyo cusboonaysiinta tooska ah Windows 10, aan bilowno.
Sidee loo Joojiyaa Cusbooneysiinta tooska ah ee Windows 10?
Habka 1: Jooji Dhammaan Cusboonaysiinta ee Goobaha
Habka 2: Beddel Siyaasadda Kooxda
Habka 3: Dami cusboonaysiinta adoo isticmaalaya Tifaftiraha Diiwaanka Windows
Habka 4: Dami Adeegga Cusbooneysiinta Windows
Habka 5: Deji isku xirka mitirka
Sida ugu fudud ee looga hortagi karo is-cusboonaysiinta waa in lagu hakiyo goobaha Windows. Inkasta oo ay jirto xad inta aad ku hakin karto iyaga. Marka xigta, waxaad gabi ahaanba baabi'in kartaa rakibaadda tooska ah ee cusbooneysiinta adiga oo beddelaya siyaasadda kooxda ama tafatirka Diiwaanka Windows (kaliya hirgeli hababkan haddii aad tahay isticmaale Windows khibrad leh). Dhawr habab oo aan toos ahayn si looga fogaado cusboonaysiinta tooska ah ayaa ah in la joojiyo waxyaabaha muhiimka ah Cusbooneysiinta Daaqadaha adeeg ama in la sameeyo isku xirka mitirka oo la xaddido wixii cusub in la soo dejiyo.
5 Dariiqooyin si aad u damiso Cusboonaysiinta tooska ah ee Windows 10
Haddii aad raadinayso oo kaliya inaad dib u dhigto rakibaadda cusbooneysiinta cusub dhowr maalmood oo aadan rabin inaad gebi ahaanba joojiso dejinta is-cusboonaysiinta, kani waa habka adiga. Nasiib darro, kaliya waxaad dib u dhigi kartaa rakibaadda 35 maalmood ka dib waxaad u baahan doontaa inaad ku rakibto cusbooneysiinta. Sidoo kale, noocyadii hore ee Windows 10 ayaa u oggolaaday isticmaaleyaasha inay si shaqsi ah dib u dhigaan amniga iyo cusbooneysiinta muuqaalka laakiin xulashooyinka waa laga noqday tan iyo markaas.
1. Riix furaha Windows + I si aad u furto Dejinta markaas guji Cusbooneysii & Amniga.
2. Hubi inaad ku jirto Cusbooneysiinta Daaqadaha bogga oo hoos ugu dhaadhac dhanka midig ilaa aad ka helayso Ikhtiyaarada Hormaray . Guji si aad u furto
3. Balaadhinta Jooji Cusbooneysiinta xulashada taariikhda liiska liiska hoos-u-dhaca iyo s dooro taariikhda saxda ah ilaa aad rabto inaad ka xannibto Windows inay si toos ah u rakibto cusbooneysiinta cusub.
Bogga Ikhtiyaarada Sare, waxaad ku sii wadi kartaa nidaamka cusboonaysiinta oo dooro haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho cusboonaysiinta alaabada kale ee Microsoft sidoo kale, goorta dib loo bilaabayo, cusboonaysii ogeysiisyada, iwm.
Microsoft runtii kama aysan saarin xulashooyinka cusbooneysiinta hore ee Windows 7 aan horay u soo sheegnay laakiin waxay ka dhigtay wax yar adag in la helo. Tifaftiraha Siyaasadda Kooxda, qalab maamul oo lagu daray Windows 10 Pro, Waxbarashada, iyo daabacadaha ganacsiga, hadda waxa ku jira xulashooyinkan oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha in ay gebi ahaanba joojiyaan habka is-cusboonaysiinta ama ay doortaan inta ay le'eg tahay otomaatignimada.
Nasiib darro, Windows 10 Isticmaalayaasha gurigu waxay u baahan doonaan inay ka boodaan habkan maadaama tafatiraha siyaasadda kooxdu aysan heli karin iyaga ama marka hore rakibo tifaftiraha siyaasadda dhinac saddexaad sida Siyaasadda Plus .
1. Riix Furaha Daaqadaha + R Kumbuyuutarkaaga si aad u bilawdo sanduuqa Run Command, ku qor gpedit.msc , oo guji OK si loo furo tifaftiraha siyaasadda kooxda.
2. Adigoo isticmaalaya liiska navigation-ka ee bidix, u sii soco meesha soo socota -
Fiiro gaar ah: Waxaad laba jeer gujin kartaa galka si aad u ballaariso ama guji falaarta bidixda ku taal.
3. Hadda, dhinaca midigta, dooro Habee Cusbooneysiin Toos ah siyaasadda oo guji dejinta siyaasadda hyperlink ama midig-guji siyaasadda oo dooro wax ka beddel.
Afar. Sida caadiga ah, siyaasadda lama habeyn doono. Haddii aad rabto inaad gebi ahaanba joojiso cusboonaysiinta tooska ah, dooro Naafada .
5. Hadda, haddii aad rabto oo kaliya inaad xaddido qaddarka otomaatiga ah ee cusbooneysiinta Windows oo aadan gebi ahaanba joojin siyaasadda, dooro Hawl gal marka hore. Marka xigta, qaybta Options, balaadhi ah Habee cusboonaysiinta tooska ah Liiska hoos-u-dhaca oo dooro goobta aad door bidayso. Waxaad tixraaci kartaa qaybta caawinta ee midigta wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaabayn kasta oo la heli karo.
6. Guji Codso si loo badbaadiyo qaabeynta cusub oo aad uga baxdo adigoo gujinaya OK . Dib u bilaw kombayutarkaga si aad u dhaqan galiso siyaasada cusub ee la cusboonaysiiyay.
Cusbooneysiinta tooska ah ee Windows sidoo kale waa la curyaami karaa iyada oo loo marayo Tifaftiraha Diiwaanka. Habkani waxa uu u anfacayaa Windows 10 isticmaalayaasha guriga ee ka maqan Tifaftiraha Siyaasadda Kooxda. In kasta oo, la mid ah habkii hore, aad u taxaddar marka aad beddelayso gelida Tifaftiraha Diiwaanka khaladku waxay keeni kartaa tiro dhibaatooyin ah.
1. Furo Tifaftiraha Diiwaanka Windows adigoo ku dhejinaya regedit in midkood sanduuqa Run amarka ama billow search bar oo riix enter.
2. Geli dariiqa soo socda ee ciwaanka oo tabo geli
3. Midig ku dhufo gal gal Windows oo dooro Cusub > Fure .
4. U magacow furaha cusub ee la sameeyay sida WindowsUpdate iyo taabo geli si loo badbaadiyo.
5. Hadda, midig-guji galka cusub ee WindowsUpdate oo dooro Cusub > Fure mar kale.
6. Magaca furaha KU .
7. U dhaqaaq curcurkaaga dhinaca ku xiga, Midig ku dhufo meel kasta , oo dooro Cusub ku xiga DWORD (32-bit) Qiimaha .
8. Magacaabida cusub Qiimaha DWORD sida NoAutoUpdate .
9. Midig ku dhufo on qiimaha NoAutoUpdate oo dooro Wax ka beddel (ama laba-guji si aad u soo qaadatid wax ka beddel sanduuqa wada hadalka).
10. Xogta qiimaha caadiga ah waxay noqon doontaa 0, i.e., naafada; beddelo xogta qiimaha ku mid oo awood NoAutoUpdate.
Haddii aadan rabin inaad gebi ahaanba joojiso cusboonaysiinta tooska ah, ku beddel NoAutoUpdate DWORD marka hore AUOptions (ama samee 32bit DWORD Value oo cusub oo u magacow AUOptions) oo deji xogta qiimaheeda sida aad doorbidayso adiga oo ku salayna shaxda hoose.
Qiimaha DWORD Sharaxaada
laba Ogeysii ka hor inta aanad soo dejin oo rakibin wixii cusbooneysiin ah
3 Si otomaatig ah u soo deji cusbooneysiinta oo ogeysii marka ay diyaar u yihiin in la rakibo
4 Si toos ah u soo deji cusbooneysiinta oo ku rakib wakhti hore loo qorsheeyay
5 U oggolow maamulayaasha maxalliga ah inay doortaan dejinta
Haddii ku dhex milmay tifaftiraha Siyaasadda Kooxda iyo Tifaftiraha Diiwaangelinta ay caddaynayso inay aad u yar tahay si loo joojiyo cusboonaysiinta tooska ah ee windows 10, waxaad si dadban u joojin kartaa cusboonaysiinta tooska ah adiga oo curyaamiya adeegga Cusbooneysiinta Windows. Adeegga la sheegay ayaa mas'uul ka ah dhammaan hawlaha la xidhiidha cusboonaysiinta, laga bilaabo hubinta wixii cusub ilaa soo dejintooda iyo ku rakibiddooda. Si loo joojiyo adeegga Cusbooneysiinta Windows-
1. Riix Furaha Windows + S kiiboodhkaga si aad ugu yeedho bar raadinta bilawga, ku qor Adeegyada , oo guji Open.
2. raadi Cusbooneysiinta Daaqadaha adeegga liiska soo socda. Marka la helo, midig-guji dusheeda oo dooro Guryaha ka menu soo socda.
3. Hubi inaad ku jirto Guud ahaan tab oo ku dhufo Jooji badhanka hoos yimaada Xaaladda Adeegga si loo joojiyo adeegga.
4. Marka xigta, balaadhi Nooca bilowga liiska hoos-u-dhaca oo dooro Naafada .
5. Keydi wax ka beddelkan adigoo gujinaya Codso daaqaddana xidh.
Hab kale oo aan toos ahayn oo looga hortagayo cusboonaysiinta tooska ah waa in la sameeyo xidhiidh mitiraysan. Tani waxay xaddidi doontaa Windows inay si toos ah u soo dejiso oo u rakibto cusbooneysiinta mudnaanta leh. Wax kasta oo kale oo waqti-qaadasho iyo cusbooneysi leh waa la mamnuuci doonaa maadaama xadka xogta la dejiyay.
1. Bilaw codsiga Windows Settings adigoo riixaya Furaha Windows + I oo guji Shabakadda & Internetka .
2. U beddelo Wi-Fi Bogga Settings iyo dhinaca midigta, dhagsii Maamul shabakadaha la yaqaan .
3. Dooro shebekadda Wi-Fi ee gurigaaga (ama midka laptop-kaagu inta badan uga faa'iidaysto si loo soo dejiyo wax cusub) oo guji Guryaha badhanka.
4. Hoos u dhaadhac ilaa aad ka hesho U deji sida isku xirka mitirka muuqaal iyo shid .
Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad dejiso xadka xogta gaarka ah si aad uga ilaaliso Windows inay si toos ah u soo dejiso wax kasta oo cusub oo mudnaanta leh. Si aad tan u samayso – dhagsii U deji xadka xogta si ay u caawiso xakamaynta isticmaalka xogta shabakadan hyperlink. Xidhiidhku wuxuu dib kuugu soo celin doonaa dejinta heerka Shabakadda; ku dhufo Isticmaalka xogta badhanka hoostiisa shabakadaada hadda. Halkan, waxaad ku ogaan kartaa inta xog ee laga faa'iidaysto codsi kasta. Guji Geli xadka badhanka si loo xaddido isticmaalka xogta.
Dooro xilliga ku habboon, dib u deji taariikhda, oo geli xadka xogta si aan loo dhaafin. Waxaad ka bedeli kartaa unugga xogta MB una beddelo GB si aad wax walba ugu fududaato (ama isticmaal beddelka soo socda 1GB = 1024MB). Keydi xadka xogta cusub oo bax
Sida loogu beddelo aaladaha Bluetooth-ka Windows 10
Cusbooneysiinta Daaqadaha? Waa kuwan dhowr waxyaalood oo aad isku dayi karto!
Sida loo furo RAR Files gudaha Windows 10
Waxaan rajeyneynaa in hagahan uu waxtar lahaa oo aad awooday jooji cusbooneysiinta tooska ah ee Windows 10 oo waxaad ka mamnuuci kartaa Windows inay si toos ah ugu rakibto cusbooneysiinta cusub oo ay kugu carqaladeyso. Noo sheeg midka aad hirgalisay faallooyinka hoose.